နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: meebo for iPhone
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:47 AM
AMK March 3, 2010 at 1:28 PM
ကျေးဇူးပါ koboyz iphone နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမျှဝေတာ အ၇င်ပို့ က ပြထားတဲ့ ဟာတွေတော့ itunes store က၇ပါပြီ
ကလူသစ် March 3, 2010 at 8:44 PM
မ I နိုင်သေးလို့ စမ်းမကြည့်နိုင်သေးဘူး :(
Ko Boyz March 3, 2010 at 11:38 PM
မ I လဲ စမ်းလို့ရတယ်လေ။
အခု မီးဘိုက ဖုန်းတွေ အကုန်နီးပါး သုံးလို့ရတယ်။
အိုင်ဖုန်းသုံးလက်စ ဖြစ်နေလို့ အိုင်ဖုန်းကို နမူနာပြလိုက်တာပါ။
AMK March 4, 2010 at 5:33 AM
ရပြီ ko boyz. ထပ်တင်ပါအုံးဗျ
ATN March 4, 2010 at 9:50 PM
JB လုပ်ချင်တာ ကိုဘ ပြောလို့ မလုပ်ရဲတော့ဘူး
တခြား နည်းလမ်းတွေ ရှိရင်လည်း ရေးပေးပါဦး
Ko Boyz March 4, 2010 at 10:04 PM
အလျဉ်းသင့်ရင် သင့်သလို ကျွန်တော် သိရှိတာလေးတွေ တင်ပေးပါမယ်။
ကိုအောင်သာငယ်ဖုန်းက Boot Rom Version အဟောင်းဆို JB လုပ်လို့ရတယ်။ ပါဝါပ်ိတ်သွားတိုင်း ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် BlackRa1n run ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သြဂုတ်-အောက်တိုဘာ ၀၉ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ ဖုန်းတွေက Boot Rom အသစ်ဆိုတော့ ပါဝါပိတ်တိုင်း ပြန်ဖွင့်ရင် အဲဒီ မိုးမည်းကို ခဏခဏ ပြန်ရွာပေးနေတော့ ကျွန်တော့်လို ရုံးနဲ့ အဲဗား ကွန်တက်လုပ်နေရသူတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူးဗျ။
မတော် နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေလို့ ချာဂျင်မသွင်းမိတုန်း ဖုန်းက ဘက်ထရီကုန်သွားရင် မိုးမည်း မရွာမချင်း သုံးလို့ရမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အချုပ်မဖောက်ဖြစ်တာပါ။ အချုပ်မဖောက်လဲ ဖုန်းကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကျွန်တော်တို့ သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲ.. ဇော်ဂျီတွေ ဘာတွေတော့ ဖတ်လို့ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ :D
အချုပ်ဖောက် = Jail Break.
တစ်ချို့က ထောင်ဖောက်တယ် သုံးတယ်။ ထောင်က Prison လို့ပဲ နားလည်ထားလို့ အချုပ်ဖောက်တယ်ပဲ သုံးလိုက်တယ်။
khin oo may March 5, 2010 at 1:36 AM
စိတ်ငြိမ်မှ စမ်းကြည့်ဦးမယ်ကျေးဇူး. ..
နေသူ July 30, 2010 at 8:57 PM
nokia phone e71 also can install or not
Ko Boyz July 31, 2010 at 12:05 AM
So far, meebo application creates were for iPhone and Android phone only.
But for winmo, blackberry,Symbian OS run mobile, you can go to this meebo mobile webpage from your mobile and use the meebo mobile version.
The link is http://www.meebo.com/mobileweb/